Rivo-doza Dorian sy ireo nosin'i Bahamas: Mazava daholo
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Rivo-doza Dorian sy ireo nosin'i Bahamas: Mazava daholo
Ny rivodoza Dorian dia nifindra avy tany amin'ny The Islands Of The Bahamas ary efa mazava avokoa ny fiatraikan'ny rivodoza ho an'ny firenena. Ekipa fanampiana no naparitaka mankany amin'ny Nosy Abacos sy Grand Bahama.
Ireo nosy izay tsy nisy fiantraikany tamin'ilay rivodoza Dorian dia mijanona misokatra ary mandray mpitsidika. Any Bahamas Avaratra Andrefana dia misy an'izany ny renivohitr'i Bahamas Nassau sy ny Nosy Paradise manodidina, ary koa Eleuthera, Harbor Island ary Andros. Ireo nosy any atsimo atsinanana sy afovoany Bahamas dia mijanona tsy misy fiatraikany, ao anatin'izany ny The Exumas, Cat Island, San Salvador, Rum Cay, Long Island, Acklins / Crooked Island, Ragged Island, Mayaguana ary Inagua.
"Tsy misy teny hampitana ny alahelo tsapanay ho an'ireo namantsika Bahamianina ao The Abacos sy Grand Bahama," hoy ny minisitry ny fizahan-tany sy sidina Bahamas, Dionisio D'Aguilar. “Fotoana hiaraha-mientana amin'ireo rahalahintsika sy anabavintsika sahirana izao, ary manampy ny firenentsika hiarina indray. Izay maniry manome fanampiana fanampiana dia tokony tsindrio eto ho an'ny fomba voamarina manampy. Niangavy ny mpandeha ihany koa izahay hanohy hitsidika ireo nosy Bahamian izay tsy tratran'ny rivodoza Dorian satria hanampy betsaka ny olontsika izany.
Ity manaraka ity dia fanavaozana ny satan'ny seranam-piaramanidina, hotely, zotram-piaramanidina ary fandaharam-potoana fitsangantsanganana amin'izao fotoana izao. Tsy lisitra feno ity ary mananatra mafy ireo mpitsidika hijery akaiky ny seranam-piaramanidina, hotely ary sambo fitsangantsanganana momba ny mety ho fiantraikan'ny drafitry ny dia.
Lynden Pindling International Airport (LPIA) any Nassau dia misokatra hatrany. Nisy ny fanafoanana ny sidina ary ny mpitsangatsangana dia tokony hifandray mivantana amin'ireo seranam-piaramanidiny raha misy fiovana amin'ny fandaharam-potoana.
Grand Bahama International Airport (FPO) mihidy.
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Leonard Thompson (MHH) any Marsh Harbour, mihidy i Abaco.
Ny seranam-piaramanidina hafa rehetra manerana an'i Bahamas dia misokatra sy miasa.
Misokatra hatrany ny trano fandraisam-bahiny any Nassau sy Paradise Island.
Mihidy ny trano fandraisam-bahiny ao amin'ny The Abacos sy Grand Bahama Island.
Ireo mpihazona ny famandrihana dia tokony hifandray mivantana amin'ireo fananana raha mila fampahalalana feno.
Ny seranan-tsambo Nassau dia misokatra sy miasa amin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo, na dia azo ovaina aza ny fandaharam-potoanan'ny sambo fitsangantsanganana.
Nikatona ny seranan'i Freeport ao amin'ny Nosy Grand Bahama.
Nofoanan'ny Ferry Bahamas ny sambo rehetra mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny. Ireo mpandeha mitady vaovao fanampiny dia tokony hiantso ny 242-323-2166.
Nikatona hatrany ny fankalazana ny Grand Celebration an'i Bahamas Paradise Cruise Line ary nofoanana ny 3 sambo sy ny 5 septambra.
Raha mila fanazavana momba ny ezaka fanampiana ny rivodoza Bahorian Dorian, azafady click here.
Nambara ny marika hotely lafo vidy tsara indrindra eto an-tany 2019
UNIGLOBE dia manitatra any Eropa miaraka amin'ny fanampiana ny Travel Travel Bulgaria